शिक्षा-स्वास्थ्य Archives - Page 41 of 84 - Nayabulanda.com
काठमाडौं : पुरुषको लिंगको आकार तथा प्रकारका बारेमा निकै चर्चा हुन्छन् । लिंग सामान्यतः सबै पुरुषको एकै प्रकारको हुँदैन । भिन्न भिन्न पुरुषको आफ्नै प्रकृतिको लिंग हुन्छ । जस्तैः बाङ्गो, टेडो, पातलो, मोटो तथा अनेक प्रकृतिको । खासमा लिंगको साइजले यौन सन्तुष्टिमा धेरै प्रभाव नपार्ने अनुसन्धानकर्ता तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु ...
एजेन्सी- स्वस्थ्य रुपमा नियममित प्राकृतिक यौनसम्पर्क गर्ने जोडिका लागि खुशीको खवर हुन सक्छ हालैको एक अनुसन्धानको नतिजा । इटालीका अनुसन्धानकर्ताहरुले गरेको एक अनुसन्धानले नियमीत रुपमा यौनसम्पर्क गर्ने पुरुषहरुको शरीरमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमतामा बृद्धि भएको पाइएको छ । सोही अनुसन्धानले यौनसम्पर्कमा साथ दिने पार्टनर अर्...
विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन सांसदहरुलाई आग्रह
काठमाडौं : अनशनरत् डा. गोविन्द केसीले जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा अनशनरत् डा. केसीले त्यहीँबाट मंगलबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै माफियामुखी ऐन ल्याउन नदिन सांसदहरुलाई आग्रह गरेका हुन् । उनले विधेयकमा भएका माफियामुखी बुँदाह...
इलाम : जिल्ला अस्पतालबाट ५० शय्यामा स्तरवृद्धि भएको इलाम अस्पताल सुधारिएको छैन । स्तरवृद्धि भएको वर्षौं बित्दा पनि सरकारी बेवस्ताका कारण आईसीयू लगायत अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध छैनन् । इलामसहित पाँचथर, ताप्लेजुङ र तेह्रथुमसम्मका बासिन्दालाई स्वास्थ्य उपचार पुर्‍याउने उद्देश्यले यो अस्पताललाई स्तर वृद्धि गरिएको हो । दर...
काठमाडौं : स्वास्थ्य अवस्था जटिल नै रहेपनि डा केसीकै चाहना अनुसार आइसीयुबाट बाहिर निकालिएको चिकित्सकहरुले बताएका छन । डा. केसीले आईसीयू बेडको अभावमा सर्वसाधारणलाई उपचारमा समस्या भएको भन्दै आपूmलाई आइसीयुबाट निकाल्न माग गरेपछि आज जनरल वार्डको ५०२ नम्बर वेडमा सारिएको हो । जनरल वार्डमा सारिएपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर...
काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर १२ दिनदेखि आमरण अनसनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था उच्च जोखिममा परेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको आईसीयुमा भर्ना गरिएका केसीको स्वास्थ्य संक्रमण उच्च जोखिममा रहेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । उनको शरीरमा सेतो रक्तकणिका संख्या ३ हजारमा...
इलाम : डा‍. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं लगिएपनि उनको समर्थनमा प्रदर्शन रोकिएको छैन । डा केसीको माग पूरा गराउन सरकारलाई दवाव दिन दिनहुँ इलाममा प्रदर्शन भइरहेको छ । शुक्रबार पनि इलाममा केसीको पक्षमा प्रदर्शन भयो । ठूलो टुँडिखेलबाट सुरु भएको र्‍याली बजार परिक्रमा गरी चोकबजारमा कोणसभामा परिणत भयो । कोणसभामा वक्ताहरुले डा केस...
इलाम : चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको माग राख्दै सत्याग्रहमा बसेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएपछि काठमाडौं हिँडाइएको छ । धरानबाट गएका विशेषज्ञ टोलीका संयोजक डा. विकास साहका अनुसार इलामबाट तीन विशेषज्ञसहितको एम्बुलेन्स भद्रपुरका लागि १०.२० मिनेटमा हिडेको छ । आर्मीको हेलिकप्टर पनि भद्रपुरमा ल्यान्...
झापा : शङ्कास्पद लगानी रहेको भनिने झापाको बिर्तामोडस्थित बी एण्ड सी अस्पतालमा प्रयोग हुने औषधि भारतबाट तस्करी गरेर ल्याइने खुल्न आएको छ। गुणस्तरहीन र नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका औषधि राजश्व छलेर तस्करीमार्फत नेपाल भित्र्याइने गरिएको तालुकवाला निकाय बताउँछन्। औषधि व्यवस्था विभााग क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरले बी ...
इलाम : चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै विगत ९ दिनदेखि सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीको अवस्था जटिल बनेको छ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका विशेषज्ञ टोलीले डा. केसीलाई काठमाडौं लैजान सुझाव दिएपछि केसीलाई हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौं लैजाने तयारी भएको हो । राती इलाममा हेलिकप्टर आउन नसक्...